Ndeapi Masangano Anobatsira Vanoshandisa Wiricheya Vashandisi | Karman® Mawiricheya
Ndeapi Masangano Anobatsira Vashandisi veWiricheya
Iwe kana yako remara nhengo yemhuri inoda a wiricheya? Kana iwe unoda kupa chimwe chinhu ku vanoshandisa wiricheya? hwiricheya masangano ndiyo sarudzo yakanakisa yekubatanidza vanopa nevanogamuchira. Kune masangano akasiyana siyana anopa zvipo uye kufamba rubatsiro kune vanhu vanoshaya.
Ngationgororei masangano epamusoro anopa rubatsiro ku hwiricheya vashandisi muUS uye nepasi rese.
Kubva kuiswa kwayo, hwiricheya Nheyo iri kushanda nechinangwa cheku kupa pachena mavhiripu pasi rose. It inopa wheelchair kuvana, vakuru, uye vanhu veese mazera mapoka, vasingakwanise kutenga wiricheya, yenyika dzinopfuura zana nemakumi mashanu. Zvinoenderana newebhusaiti yavo, hwaro hwakapa inopfuura miriyoni imwe mavhiripu kune vanhu vanoshaya pasirese kwema 17years apfuura.
Tariro Haven International
Sangano repasi rose rerubatsiro kupa mawiricheya mune dzinenge nyika 108. Iri risingabatsiri sangano rinogamuchira iro rakashandiswa uye itsva mavhiripu uye mushure mekugadziridzwa, inoapa kune vanoshaya vari munyika dzakasiyana kuburikidza neboka rakazvipira revanozvipira vekunze uye nyanzvi.
Joni nevashandi vake vanozvipira vanovavarira zvinopa pamweya kuzorodza uye kunakidza ku remara vanhu. Kunze kwekupa nzvimbo yekudzokera kuvanhu vakaremara, Joni uye shamwari dzinopa mavhiripu kuvanhu vanoshaya. Vanobvumawo wiricheya mipiro uye mamwe masangano anobatsira nechinangwa chekugovagazve.
Tungamira Ruyamuro Rwenyika Dzese
Yakananga Ruregerero isangano repasi rese rinopa ekurapa masevhisi mu80 uyezve nyika pasirese kusanganisira matunhu makumi mashanu eUSA. Sangano rinopa mishonga inoponesa upenyu kumachiremba navanamukoti pasirese; inobatsira nyika munjodzi uye inopa hwiricheya mipiro kuvanhu vanoshaya.
Kuona rusununguko rwe kufamba, iri sangano rinogamuchira kushandiswa mavhiripu uye wovagadzirisa kuti vagoverwe kuvanhu vanotambura pasina muripo.
Sangano risingabatsiri, richitambira mupiro wezvakashandiswa, zvekare uye zvitsva mavhiripu. Inotarisira kufadza vanhu nekugamuchira mipiro yewiricheya uye anovapa vanoshaya vasina mutengo. Sangano rakagadzirisazve rakashandiswa uye rekare wiricheya so kuti vanoshaiwa vagovapindamo mamiriro matsva.
Shamwari dzevakaremara Vakuru uye Vana
Yakasimbiswa nechinangwa cheku zvinopa zvigadzirwa zvakagadziridzwa, kusanganisira mavhiripu, kuvana nevakuru. Sangano inopa isina mutengo or mawiricheya anodhura kuvanhu vanoshaya zvichienderana nemamiriro avo emari.
LifeNets- Wiricheya Chirongwa
Anogamuchira mavhiripu mipiro uye kugoverazve kune vanoshaya vasingakwanisi kukwanisa wiricheya MuUnited States.
Muchinjikwa-kuremara sangano; kushandira vanhu vane kunzwa, hutano hwepfungwa, kuziva, muviri uye zvimwe hurema. Inovavarira kupa simba remara vanhu vane kodzero dzavo dzekutanga kuburikidza nekuvandudzwa kwenyika.
Yakakosha Vana Fund
Mubatanidzwa wezvikoro, masangano ebasa rezvemagariro uye zvipatara zvinochengeta vana vakasarudzika uye vari panjodzi vechidiki. Ivo vanozivikanwa hwiricheya Van Rubatsiro chirongwa inotarisira kubatsira vanoshaya mhuri kuyambuka US nekuparadzira vakapa mawiricheya kune avo panyama remara nhengo yemhuri.
Muscular Dystrophy Sangano (MDA)
Kupararira muUS, MDA inogamuchira manyore uye inofambiswa wiricheya zvipo, mibhedha yechipatara, kusimudza macheya nemimwe michina yekurapa. Mushure mekugadzirisa, sangano rinogovera zvakare michina iyi pakati pevanoshaya vemunharaunda pasina muripo.
Kuronga Kunze Kwemugwagwa Rwendo neMumwe Munhu ari muWiricheya